Bayern Munich, iyo FC Cologne oo Badiyay iyo Hertha Berlin oo Ka Badisay Borussia Dortmund – Radio Muqdisho
Bayern Munich, iyo FC Cologne oo Badiyay iyo Hertha Berlin oo Ka Badisay Borussia Dortmund
Kooxda Augsburg ayaa waxaa garoonkeeda SGL Arena 0-4 uga badiyay kooxda Bayern Munich.
Kooxda Bayern Munich ayaa afarta gool dhalisay qeybtii danbe ee ciyaarta,waxaana labo kamid ah u dhaliyay ciyaaryahan Arjen Robben,halka labada gool ee kale ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada kala ah Mehdi Benatia iyo Robert Lewandowski.
Kooxda Bayern Munich ayaa horyaalka Jarmalka ee Bundesliga ku hogaamineyso39-dhibcood,halka kooxda Augsburg ay horyaalka uga jirto kaalinta sedaxaad,iyadoo leh 24-dhibcood.
Kooxda Schalke 04 ayaa waxaa garoonkeeda Veltins-Arena 1-2 uga badiyay kooxda FC Cologne.
Kooxda FC Cologne ayaa waxaa qeybtii danbe ee ciyaarta labada gool u kala dhaliyay ciyaaryahanada kala ah Anthony Ujah iyo Matthias Lehmann oo dhaliyay gool rigoore ah.
Ciyaaryahan Leroy Sane ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka kaliya u dhaliyay kooxda Schalke 04.
Kooxda Schalke 04 ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 23-dhibcood,halka FC Cologne ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 18-dhibcood.
Kooxda Hertha Berlin ayaa garoonkeeda Olympiastadion 1-0 uga badisay kooxda Borussia Dortmund oo ay xaaladu ku xuntahay.
Ciyaaryahan Julian Schieber ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Hertha Berlin.
Kooxda Hertha Berlin ayaa kala horeynta horyaalka Jarmalka uga jirto kaalinta 12-aad,waxana ay leedahay 17-dhibcood,halka kooxda Borussia Dortmund ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Dowladda oo lagu amaanay meel marinta qorshe howleedka Qaran ee la dagaallanka xadgudubka “War-saxaafadeed”
Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud oo Faah faahin ka bixiyay Cida uu u dhexeeyo Dagaalka Dhuusa mareeb ka dhacay